Thenga ihembe elingenamikhono elingenamikhono le-Bow Knot Tutu Lamantombazane - Ukuthunyelwa kwamahhala futhi akukho ntela | WoopShop®
Ihembe elingenamikhono le-Bow Knot Tutu Red Dress Lamantombazane
$ 14.99 Intengo ejwayelekile $ 19.99
Usayizi wengane 90 100 110 120 130
Ihembe elingenamikhono le-Bow Knot Tutu Red Dress Lamantombazane - 90 ihlehlisiwe futhi izothunyelwa ngokushesha nje lapho isibuyile esitokweni.
Izinto: Uboya Obuthambile
Ukulingana: Kufanela okuncane kunokujwayelekile. Sicela uhlole imininingwane yokulinganisa yalesi sitolo
Inombolo yesibonelo: 345121
Kuhle! Kodwa-ke kwathatha isikhathi eside ukuyithola kangangokuba angizange ngiyithole ngesikhathi sikaKhisimusi ngesikhathi. Ncoma uku-oda okungenani izinyanga ezimbili ngaphambi kwesikhathi. Kutholwe 2/1/7 futhi kwa-oda ngomhlaka 21/11/11
Usayizi muhle kakhulu, indodakazi yami ivame ukugqoka iminyaka emithathu futhi kuhle. Ngokushesha kunokulethwa okulindelekile
Lihle kakhulu futhi lisezingeni eliphakeme